Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → juillet → 30 → Ankazoabo Atsimo : Tranona mpitsabo voaroba very avokoa ny entana sarobidy rehetra
Nitrangana fanafihan-jiolahy nirongo basy indray tany amin’ny distrikan’ Ankazoabo Atsimo, ny alin’ny alatsinainy hifoha talata teo, tokony ho tamin’ny roa ora maraina. Tranona mpitsabo iray miasa ao amin’ny hopitaly Salfa, monina ao amin’ny fokontany Ankalirano Mahafaly, no norobain’ny dahalo am-polony, ka lasa avokoa ny entana rehetra sarobidy tao an-trano zakan’ireo malaso.
Voaambana basy ny tompon-trano. Raha ny vaovao voaray dia nody nandondona fa hoe mitondra marary hotsaboina ao an-tranon’ity dokotera vavy ity ireo jiolahy. Tsy nety namoha-trano ity farany noho ny tahotra, ka novakian’ireo dahalo avy hatrany ny varavarana. Nandositra avy hatrany ilay ramatoa mpitsabo raha nahita ireo malaso nanao be miditra. Tsy afa-nihetsika kosa rangahy vadiny sy ny olona tao an-trano fa voaambana basy, ka niliba ireo malaso.
Mila fampitaovana ny mpitandro ny filaminana. Tsy mijanona amin’ny halatra omby arahina vono olona intsony ireo malaso any amin’ny distirikan’Ankazoabo Atsimo, fa mirotsaka hatramin’ny famakiana trano ihany koa. Mangataka angidim-be sy fampitaovana harifomba ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina mitebiteby lava any an-toerana, hiadiana ny asan-dahalo sy asan-jiolahy mitam-basy mirongatra amin’izao.